Indawo epholileyo yePocheon - I-Airbnb
Indawo epholileyo yePocheon
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu엠제이
Le yindlu apho unokuphumla kwaye uhambe nosapho lwakho, izithandwa, okanye wedwa. Kukho imvakalelo yokuthuthuzela eyonwabela ukuzola kunye nentuthuzelo ngaxeshanye.
Siza kukunika isiqinisekiso kuhambo lwakho lweshishini oluya ePocheon.
Fumana ikhefu kumbindi wesixeko apho unokukhulula ngokuzolileyo ingqondo yakho ediniweyo.
Ngamanye amaxesha, kukho abantu abenza ubhukisho kwangolo suku olunye.Ngosuku olunye ubhukisho phakathi evekini, ukungena kuyenzeka ngo-6pm.
Kuko konke okunye ukubhukisha, ukungena kuyafana no-3pm.
Kulunge kakhulu ukuhlamba, ukupheka, ukwenza itheko nabahlobo, indawo yokupaka simahla, ibala lokudlala labantwana, kunye nebala lebhola ekhatywayo.Yindawo entle yohambo okanye ukukhwela ibhayisekile nosapho kunye nabahlobo bakho.
Indawo ejikelezileyo idume njengeyona ndawo yabakhenkethi enkulu njengeHerb Island (imizuzu engama-25), iSanjeong Lake (imizuzu engama-40), iPocheon Art Valley (imizuzu eli-10), iGadi yeBotanical (imizuzu engama-40), iChibi leKomori (imizuzu engama-30), igalufa eyahlukeneyo. izifundo, INtaba Wangbang, neentlambo..
Izinto zasekhitshini ezisisiseko, izixhobo zokusebenza, kunye nezinongo zinikiwe. Yisebenzise kwaye uyilungelelanise.
Izinto zangasese ziyafumaneka ngaphandle kweebrashi zamazinyo.
Kukho ii-marts ezinkulu ezi-2 (i-GS Super, i-Hanaro Mart) kunye neevenkile ezi-2 ezilula phambi kwendlu ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 yokuqhuba.
I-Pocheon Terminal yimizuzu eli-15 ngeenyawo kunye nemizuzu esi-7 ngemoto, kwaye iHolo yeSixeko sasePocheon ephakathi kwedolophu ikufuphi.
Ngamanye amaxesha, kukho abantu ababhukishayo kwangolo suku olunye, Ngeentsuku zeveki, ubhukisho losuku olunye lungangenwa ukusukela ngentsimbi yesi-6pm.
Kuko konke okunye ukubhukisha, ukungena kuqale ngo-3pm.
Ukuba ungathanda ukushiya imithwalo yakho okanye utshintshe ixesha lokungena kunye nokuphuma, nceda uqhagamshelane nathi.
4.75 · Izimvo eziyi-138
IPocheon idume njengendawo enkulu yabakhenkethi, kubandakanya iHerb Island, iSanjeong Lake, iMarike yeentsuku ezi-5, iMarike yeentsuku ezi-5, iSinbuk Hot Spring, iBears Town Ski Resort kunye neSledding Range, iArt Valley, iHantangang Sky Bridge, kunye neendawo ezahlukeneyo zegalufa. Xa kuthelekiswa neendawo zokukhenketha, azikho zininzi iindawo zokuhlala ezijikeleze isixeko, kwaye kukho iindawo ezimbalwa zokutyelela emini kwaye uphumle esixekweni ngokuhlwa. Le ndawo ikumgama wokuhamba ukusuka kumbindi wesixeko (isikhululo sebhasi) kwaye izimele, icocekile kwaye ikhululekile. Indawo yezemidlalo ikufuphi nayo, ngoko ilungile kuhambo olufutshane okanye ukukhwela ibhayisekile.
I-Pocheon Expressway ivula kwaye idibanise neSeoul ngemizuzu engama-30.
Hanyang galbi- Idong iimbambo 30,000 winile 5 imizuzu ngeenyawo
Molo yum yum - imifuno eluhlaza i-aglio olio, i-oven pizza
(Indawo yokuhlala yangaphandle)
Iinyawo zeNkuku zeHobyeonggol-iinyawo zenkukhu ezineziqholo
Kubuthuntu- Neungi chicken baeksook, Neungi duck
Jingalbi- Galbi-tang Imbiza yelitye Bibimbap
Barda Inkukhu - Chimaek
Chicken Princess - Green itswele
Ipleyiti yelitye jju samyi - jju sam
Pocheon Ttukbaegi-Isuphu yembotyi yeSoya Ihluma Haejangguk (Isidlo sakusasa)
I-Terminal Nutrition Soup - Imbiza eshushu yaseBoshintang
I-Sundaeguk yomkhosi - iSundaeguk
Kokochango- Green itswele Inkukhu Muktae Jupo Fried Beer
Jeonbindaetteok (igama alaziwa)- Pajeon Makgeolli
(Indlu esecaleni komnyango wase Kkoko Warehouse)
Eyona suphu yokutya kwaselwandle - ukutya kwaselwandle okushushu
Island Village Skate-Hongeoaetang
Inyama yehagu iLid yehagu Isisu-Isisu sehagu eyosiweyo
Wangbang- Wolnamssam Shabu
Octopus Myeongga- Octopus Bowl Bulnak
IBarbecue yaseKorea - Inkukhu yeBarbecue
Inja eshushu yaseMyeongnang ecaleni kwePocheon Terminal, Dongdaemun Yeopgi Tteokbokki
IBakken Bakery (Isonka endisithandayo)
Isonka esenziwe ekhaya phambi kwesango elikhulu lePocheon-cho
Ezimbini ekudibaneni kweendlela zaseGoohannae, e-Ediya
Ediya 2nd umgangatho kufuphi nehotele
IJijang Mountain Makguksu-Makguksu (Endiyithandayo)
(Icala laseHerb Island)
I-Cheongsan Delicacy-Mushroom Shabu (Endiyithandayo) I-Mushroom eswiti kunye neSuphu emuncu
Deokdun-ri 136 Cafe- Iti yeentyatyambo
(Phambi kwe Ildong Terminal)
Ihwam Skewers - Izikeyi zemvana
Umbuki zindwendwe ngu- 엠제이
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gunnae-myeon, Pocheon-si